Clearspace-1 mission uzipho in space imfucumfucu - Micro-Semiconductor.com
Clearspace-1 mission uzipho in space imfucumfucu
Kuhlelwe i-2025, i-Clearspace-1 satellite izosebenzisa ukunyakaza kwe-pincer ukuqoqa into yayo ebhekiswe kuyo, ngaphambi kokuyinika ukungena kabusha okulawulwayo emkhathini womhlaba. Futhi i-Elecnor DEIMOS izoklama uhlelo lwe-Attitude and Orbit Control System (AOCS). Lokhu kuzoqondisa futhi kubeke isathelayithi ukuze isize ukuthatha i-junk space, kusetshenziswa ama-generator kagesi, ama-thrusters kanye nezimpondo.
"I-Clearspace-1 isiqinisekiso sendima yethu njengomhlinzeki wezinhlelo ze-Guidance, Navigation and Control eYurophu," kusho u-Ismael López, isikhulu se-Elecnor DEIMOS Group.
"Lokhu kungumsebenzi omusha futhi siyajabula ukuthi ubuchwepheshe namandla ethu ezinkampanini zethu afana nezingqinamba zobuchwepheshe ezidingekayo."
Ngemuva kokuthi umqondo wemishini yaseClearspace uvunyelwe yi-European Space Agency ngonyaka owedlule, i-ClearSpace - isiqalo saseSwitzerland esinobuchwepheshe kwezamarobhothi - yaqala ukuhlanganisa lo msebenzi. Kuhlanganise ukuhlangana kobungcweti, kufaka phakathi i-Elecnor DEIMOS e-UK, kugqamisa i-UK Space Agency.
Uhlelo lwe-Attitude and Control lwe-Elecnor DEIMOS UK luzohlanganiswa kuyo yonke i-satellite 'autopilot'. Uhlelo lwe-Guidance, Navigation and Control lwakhiwa yi-Elecnor DEIMOS ePortugal, kanye nezinye izinhlangano zaseJalimane nezasePortugal. Le nhlangano izophinde yenze izivivinyo ukuxhasa i-ClearSpace emhlanganweni, ukuhlolwa nokusebenza kwemishini.
"Iminyaka eyizigidi eziyizinkulungwane eziyishumi nane - phakathi kweBig Bang nekwindla ka-1957 - isikhala besingacacile," kusho uDkt Graham Turnock, oyiChief Executive of the UK Space Agency. Kepha kusukela ekwindla sesibeke cishe iziphuphutheki eziyizinkulungwane eziyi-10 esibhakabhakeni, iningi lazo manje elingasasebenzi noma elonakele.
“I-UK izohola phambili ekulandeleleni nasekulandeleni le nkunkuma eyingozi, futhi ngiyajabula ukuthi ubuchwepheshe obusekela lesi sifiso sokuphayona buzokwenziwa eBrithani. Ku-2018, i-300km ngaphezulu koMhlaba, isathelayithi yaseBrithani - ephethwe ngu-removeDEBRIS - isabalalise ngempumelelo inethi ku-orbit ukukhombisa ukuthi ingabanjwa kanjani imfucumfucu yasemkhathini. Lo mbhikisho, usebenzisa into encane ethunyelwe yisathelayithi, waba yingxenye yemishini yokuhlola amasu wokuqeda imfucumfucu yasemkhathini. ”
Bheka okungenamsoco wamanethiwekhi wesathelayithi i-SusaDEBRIS okungenamsoco
Isathelayithi i-DeleDEBRIS kwaba ukwakhiwa kwenhlangano yezinkampani ezisemkhathini nezikhungo zocwaningo ezaziholwa yiSurrey Space Center eNyuvesi yaseSurrey.
Yini into eqondiwe? Inhloso yeClearspace-1 ihlose ukususa ekuzungezeni i-VESPA Upper Part (ukulandelela: www.n2yo.com/satellite/?s=39162) eyethulwe ngoMeyi 2013 nge-VEGA Flight VV02, ephethe isathelayithi i-Proba V.
Ingxenye ephezulu ye-VESPA kanye ne- "Small Satellite Interface Structure" ebithwele iPoba V yahlala inamathiselwe ngemuva kokuhlukaniswa kukaProba, kubika i-Elecnor DEIMOS.
Muva nje, i-European Space Agency iqhakambise inkinga ekhulayo yemfucumfucu yasemkhathini. Ngokuqondile, ukuthi inani lama-satellites ku-orbit lizokhula kakhulu ngokwethulwa kwe-'mega-constellations 'ye-satellite broadband.
Njengoba lezi zinkanyezi zingaba nezinkulungwane zeziphuphutheki, ubungozi bokushayisana futhi ngaleyo ndlela kwandiswe imfucumfucu yasemkhathini.
"Ukushayisana okukodwa noma ukuqhuma esikhaleni kudala izinkulungwane zezinsalela ezincane, ezihamba ngokushesha zemfucumfucu ekwazi ukulimaza noma ukubhubhisa isathelayithi esebenzayo," kusho i-ESA. "Isibonelo, ngo-2007, ukubhujiswa ngamabomu kwesethelayithi i-FengYun-1C kwaphindeka kabili inani lemfucumfucu endaweni engamakhilomitha angaba ngu-800, nokuholele ekukhuleni okungu-30% kwenani labantu bensalela ngaleso sikhathi."
Ngasekuqaleni kwekwindla, i-UK Space Agency imemezele izimali zamaphrojekthi okulungisa imfucumfucu yasemkhathini. Izinkampani eziyisikhombisa zase-UK zinikezwe isabelo semali engu- £ 1m yezimali ukusiza ukulandelela imfucumfucu esikhaleni.
I-ejensi ilinganisela ukuthi njengamanje kunezinto eziyizigidi eziyi-160 ku-orbit - ikakhulukazi imfucumfucu - ezingashayisana neziphuphutheki ezinikezela ngezinsizakalo esizisebenzisa nsuku zonke.
Amaphrojekthi ayisikhombisa azothuthukisa ubuchwepheshe bezinzwa - noma ubuhlakani bokufakelwa - ukuqapha imfucumfucu yasemkhathini eyingozi. Yilezi: Lumi Space, Deimos, Lift Me Off, D-Orbit, Fujitsu, NORSS ne-Andor.
Isithombe: I-ClearSpace - Umsebenzi we-ClearSpace-1
Bona futhi: I-Astroscale inyusa u- $ 191m wokuxhasa ngemali ukukhishwa kwemfucumfucu yesikhala